Gujii Lixaa Keessatti Namoonni Torba Ajjeefaman: Angawaa – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooGujii Lixaa Keessatti Namoonni Torba Ajjeefaman: Angawaa
WAASHINGITAN, DIISII (VOA Afaan Oromoo) — Bulchiinsa naannoo Oromiyaa Godiina Gujii aanaa Galaanaa keessatti hidhattonni haleellaa gaggeessaniin namoonni 7 ajjeefamuu waajiira bulchiinsa aanaa sanaa beeksisee jira.
Hidhattoota haleellaa kana gaggeessuun dheessaa turan jedhaman keessaa 6 humnootii nageenyaan ajjeefamuunis ibsamee jira.
Waajiira Komunikeeshinii aanaa kan ta’an Obbo Gabayyoo Yaadatee garee shoroorkeessaa jechuun kan waaman Shaneen, dheengadda Caamsaa 14 bara 2013 ganda Shoroo Caalbeessaa jedhamu keessatti sivilootaa fi itti gaafatamtoota hojii kan mootummaa ajjeesan jedhan.
Siviloonni ajjeefaman sirnii awwaalcha isaanii rawwatamee yeroo ammaa naannoon sun tasgabbaa’uu ibsan.Haleellaan kun bifa qindaa’een kan gaggeeffamuu ta’u fi garee shoroorkeessaa jechuun waaman sanas adamsuuf humnii nageenyaa bobba’ee hojjataa kan jiru ta’u obbo Gabayyoo Yaadatee ibsanii jiru.
Haleellaa kanaaf gareen itti gaafatama fudhatee kan hin jirree yoo ta’u garee haleellaa kana geesisee jechuun kan aangawaan komunikeeshinii himatan qunnamuuf yaaliin godhe hin milkoofnee jechuun Yonaataan Zabdiwoos Hawaasaa irraa gabaasee jira.
Hidhattoonni PP/OPDO godina Gujii keessatti bosona uumamaa fi manneen jireenya uummataa gubaa jiru! Guraandhala 11,…
SQ Sagalee Qeerroo Bilisummaa, Caamsaa 04 2019 Kibba Oromiyaa Godina Gujii Lixaa keessatti wa
SQ Sagalee Qeerroo Bilisummaa, Caamsaa 04 2019 Kibba Oromiyaa Godina Gujii Lixaa keessatti walin ONN…
WBOn torban kana Gujii keessatti (30km - 60km from Nagelle Borana town) agarsiise
WBOn torban kana Gujii keessatti (30 - 60km from Nagelle Borana town) agarsiise Caamsaa 28,…
‘Haqni intala kiyyaa osoo hin argamin waggaa tokko guute’ -Abbaa Haymaanot, Obba Badhaadhaa